Ugu yaraan 36 ruux kale ayaa la sheegayaa in lagu dilay meel dhagax laga qodo oo ku dhawa magaalada Mandera, woqooyi-bari Kenya. - iftineducation.com
iftineducation.com – Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarkii Mandera ee ay ku dhinteen ugu yaraan 36 qof. Weerarka ayaa ka dhacay meel dhagax laga qodo oo ku dhow magaalada Mandera, woqooyi-bari Kenya.
Warbixin qoraal ah oo ka soo baxday Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay fuliyeen guutada Saalax Nabhaan isla markaana uu jawaab u yahay hawlgalada ciidamada Kenya ka wadaan gudaha Soomaaliya iyo dhibaato ay sheegeen in lagu hayo shacabka magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
Weerarka ayaa dhacay xalay xilli dambe, waxaana dadkaasi qaar ka mid ah ay sheegayaan in la toogtay qaar kalena qoorta laga gooyay iyaga oo dhex jiifay teendhooyiin ku yaala goobtii ay dhagaxa ka qodayeen.
Dhammaan dadka la dilay ayaa ahaa dad aan Muslimiin ahayn, waxaana qaar ka mid ah dadkii badbaaday ayaa booliska u sheegay in dadkii Muslimiinta ahaa ee goobta ku sugnaa gooni loo bixiyay oo aan la dilin.
Madaxa booliska Kenya, David Kimaiyo ayaa sheegay in dadkan la dilay ay ku sugnaayeen meel qiyaastii Mandera u jirto 15km, halkaas oo lagu magacaabo Koromey.
Weerarkan ayaa dhacay saacado uun kaddib markii koox hubeysan ay bam-gacmeed ku tuureen goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada Wajeer, waxayna rasaas 10 daqiiqo socotay lagu furay xarun boolis.
Weerarkaasi waxaa ku dhintay hal qof, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Toddobaad ka hor ayaa 28 qof oo aan Soomaali ahayn oo ku safrayay bas ayaa lagu dilay meel ka baxsan magaalada Mandera kaddib markii rag ka tirsan Al-Shabaab ay dhexda u galeen bas u socday magaalada Nairobi.
Hoggaamiyeyaasha Muslimiinta ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid aan waafaqsanayn shareecada Islaamka.
Dharka askarta US oo lagu xirayo kamira